Ny IL-76 vaovao
fanontaniana Ny IL-76 vaovao
1 taona 5 volana lasa izay #729 by AJT67
Nanontany tena aho raha misy olona liana amin'ny IL-76 vaovao?
Voalohany indrindra, fisaorana maro, fampivoarana mahavariana ny fiaramanidina lehibe izay niandrasako nandritra ny taona maro, na dia misy olana roa aza, ny iray tsy ampy taona, ary ny iray hafa tsy mahazatra milaza ny kely indrindra.
1. Niezaka namantatra ny rafitra fanaraha-maso SHIFT + 4 aho. Misy olona manana an'io ho an'ity Saitek X-52 ity?
2. Rehefa mamarana ny sidina aho dia mampihena ny FSX eo amin'ny zoro havanana amin'ny farany ambany amin'ny efitranoko. Tsy azoko atao ny manetsika an'io varavarankely io, ary tsy maintsy mamarana ny tetikasa FSX hanakatona ilay sim.
Ny sim sim dia efa misy hatramin'izao, ary tsy misy zavatra mahazatra voafetra, noho izany dia azoko antoka fa mety ho olana ho an'ny hafa izany.
Raha misy olona manana hevitra mikasika ny fomba hamahana ireo zavatra ireo, azafady azafady mba valio aho.
Fotoana mamorona pejy: 0.122 segondra